shaqaalahii caafimaadka ugu badnaa ayaa laga helay COVID-19 Kenya: – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA shaqaalahii caafimaadka ugu badnaa ayaa laga helay COVID-19 Kenya:
shaqaalahii caafimaadka ugu badnaa ayaa laga helay COVID-19 Kenya:
Ugu yaraan 72 ka mid ah shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee Kenya ayaa laga helay cudurka ‘COVID-19’ illaa iyo hadda, sida laga soo xigtay Wasaaradda Caafimaadka ee waddanka.
Xog-hayaha Maamulka Caafimaadka Rashid Aman ayaa xaqiijiyay tiradaas intii lagu guda jiray shir jaraaid oo uu qabtay Talaadadii.
“Marka laga hadlayo cudurkan CVID-19 ee hadda socda, 72 shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee safka hore ah ayaa ka fayrisay fayraska deegaanno kala duwan. 19 ka mid ah kuwan ayaa hadda lagu maareeyaa xarumo caafimaad oo kala duwan, ”ayuu yiri Aman.
Aman ayaa hore u sheegay inay lagama maarmaan tahay in qaar ka mid ah shaqaalaha daryeelka caafimaadku ay cudurka qaadaan isaga oo intaa ku daray in cudurka lagu qaado COVID-19 aanu ahayn xukun dil ah isla markaana midkani u taagan yahay fursad fiican oo uu kaga bogsado.
Hase yeeshe, qatarta infekshanku ma uusan wiiqin go’aankooda shaqadooda. Aniga, sidaa darteed, waxaan rabaa inaan fursadan uga faa’ideysto oo aan uga mahadceliyo sida ay uga go’antahay iyo u go’naanshahooda ay ugu adeegaan dadka reer Kenya xitaa marka ay jiran jirrooyinka. “
Ammaan, si kastaba ha ahaatee, wuxuu tilmaamay in shaqaalaha caafimaadku aysan ahayn shaqaalaha safka hore oo keliya ee laga yaabo inay ku bukoodaan fayraska iyaga oo la fal galaya kiisaska COVID-19.
Aman wuxuu sheegay in dowladdu ay hubineyso inay siineyso qalabka difaaca ee lagama maarmaanka u ah shaqaaluhu maadaama shaqaaluhu howlahooda gudanayaan si looga hortago infekshinkooda.
Golaha Caalamiga ah ee Kalkaaliyayaasha Caafimaadka (ICN) ayaa sheegay in kumanaan kalkaaliyeyaal caafimaad ah uu ku dhacay COVID-19 boqollaalna ay horay u dhinteen, laakiin dowlado badan ayaa awoodi waayey inay si sax ah u sheegaan inta aysan ururinaynin macluumaadkaas.
ICN ayaa sheegtay in guuldaradan ay kalkaaliyeyaal dheeri ah iyo bukaannadooda qatar gelisay intii lagu jiray dagaalka ka dhanka ah COVID-19.
Ururka Caafimaadka Adduunku wuxuu carabka ku adkeeyay muhiimada ay leedahay in wadamadu si sax ah u qalabeeyaan oo ay magdhow siiyaan kalkaaliyayaasha kalkaaliyaasha noloshooda halis gelinaya wanaagga bina aadamka gaar ahaan xilliyada dhibaatooyinka.
Previous articleMasar iyo Mareykanka oo ka wadahadley damaca Niil ee Ethiopia,iyo dhibaatada Libya
Next articleGabadhii ka duubtey muuqalka dilkii George Floyd oo ka warantey
Saraakiil Isku Dayay In Ay Qudha ka jaraan Ra’isal Wasaaraha Ethiopia...